Inona avy ireo tombony sy sandan'ny rafitra informatika amin'ny desktop cloud? - Vaovao - Shenzhen VisionVision Technology Co. LTD
Home > News > Vaovaon'ny indostria > Inona avy ireo tombony sy sandan'ny rafitra informatika amin'ny desktop cloud?
1. Voatahiry ao anaty rahona afovoany ny angona; ny tahirin-kevitra dia voatahiry ao amin'ny scheduler, izay mamaha amin'ny fomba mahomby ny olan'ny fahaverezan'ny data ateraky ny tsy fahombiazan'ny solosaina na ny fahasimbana nefa tsy manahy momba ny tsy fahombiazan'ny solosaina na ny fahasimbana.
2. Famerenana mandeha ho azy; mamaha tsara ny olan'ny backup tahiry. Ny backup backup automatique dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny angona ankapobeny amin'ny orinasa. Eo ambany fiarovana ny kapila mafy marobe, ny regulator dia azo tanterahina amin'ny fanjakana milamina.
3. Fiarovana rehefa tsy mahomby ny solosaina birao rahona. Rehefa miasa miaraka amin'ny rafitry ny rahona amin'ny birao dia tsy hanjavona ny angona rehefa misy tranga tsy ampoizina miteraka fahatapahan'ny herinaratra na efijery manga. Mila mamerina fotsiny na manova terminal terminal ianao mba hanohizanao ny asany.
4. Rehefa mandeha ny rafitra dia mampiasa famatsiana herinaratra USP izy io. Na dia aorian'ny tsy fahombiazan'ny herinaratra tsy ampoizina aza dia afaka miankina amin'ny mpandahatra rahona ho an'ny famatsiana herinaratra tsy tapaka. Miaraka amin'ny backup backup data maromaro, na dia simba aza ny kapila mafy dia tsy ho very ny angona.
5. Ny seranana dia azo fehezina mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny orinasan'ny mpividy. Na kilemaina tanteraka na misokatra tanteraka izy io dia mila alalana amin'ilay orinasa. Ny fifehezana feno ny USB, port serial, port parallèle, infrared sns ... dia afaka maka tahaka ny orinasa amin'ny fomba mahomby. Tafaporitsaka ny angona.
6. Sehatra anti-virus amin'ny rahona, ny rafitra ankapobeny dia hiaritra fatiantoka lehibe rehefa sendra viriosy. Ny rafitry ny birao rahona dia manana mekanisma fanoherana ny otrik'aretina mahery vaika ary teknolojia fampielezana tena ambony miaro ny rafitra amin'ny fahavoazana.
7. Natokana tsara ny tamba-jotra. Ny anatiny sy ivelan'ny birao dia misaraka tanteraka amin'ny ivelany. Ny tambajotra anatiny dia ampiasaina indrindra amin'ny fikirakirana ny angon-drakitra, manasaraka amin'ny fomba mahomby ny fisie amin'ny tontolo ivelany.
8. Antontan-taratasim-pitantanana itsinjaram-pahefana, isan-karazany ny isan'ny mpiasa, ny manam-pahefana samy hafa ihany koa, ny fampahalalana ny angon-drakitra dia ny fandaminana sy ny fampiharana bebe kokoa.
Teo aloha:Inona avy ireo tombony azo amin'ny touch all-in-one?
Manaraka:Torolàlana ho an'ny solosaina ho an'ny solosaina rehetra